Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Oo Kusii Jeeda Magaalada Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Oo Kusii Jeeda Magaalada Kismaayo
Garowe – Mareeg.com: Madaxweyne ku xogeenka maamulka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar “Camey” iyo wafdi uu hogaminayo ayaa kusii jeeda magaalada Kismaayo ee xarrunta gobolka Jubada Hoose, halkaasoo ay ka tilayaan maamulka KMG ah ee Juba iyo ciidamada Kenya.
Wafdiga uu hogaaminayo Madaxweyne ku xigeenka Puntland ee dhawaan la doortay Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar “Camey” ayaa saaka gaaray magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, iyagoo halkaas ka raaci doona diyaarad geyneysa Kismaayo.
Waxaa C/xakiim Camey safarkiisa ku wehliya qaar ka mid ah Isimada iyo waxgaradka Puntland, waxaana Gaalkacyo kusoo dhaweeyey masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo degmada Galkacyo oo u hor kacayo duqa degmada Mudane Axmed Cali Salaad.
Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo wafdigiisa Kismaayo uga qayb gali doona shirar iyo xaflad ka dhici doonta maalmaha soo socda, kuwaasoo ay qabanayaan maamulka KMG ah ee Juba, waxaana ka mid ah xaflad lagu caleema saarayo Axmed Madoobe.
Waa safarkii ugu horreeyey Cabdixakiin Cabdullaahi Camey uga ambabaxo magaalada Garowe ee xarrunta maaamulka Puntland, tan iyo markii xilka madweyne ku xigeenka maamulkaas loo doortay 8-dii bishaan Janaayo 2014.
Somali-American among the Afghan restaurant attack that killed 21 people
Shirweyne Looga Hadlayo Dib U Dhiska Muqdisho Oo Maanta Furmay